I-Fiona Fox Archives - Ilungelo Lase-US Lokwazi
AbakwaReuters babika ukuthi okutholwe yi-IARC 'okuhleliwe ngaphandle' kuyindaba engamanga
Posted on October 20, 2017 by UStacy Malkan
Izibuyekezo: Imibhalo emisha yeMonsanto idalula ukuxhumana okuhle kuMlobi weReuters, I-Roundup Trial Tracker (Ephreli 25, 2019)
I-IARC iyazenqaba izimangalo ezingamanga ku-Reuters athikili, isitatimende se-International Agency for Research on Cancer (Okthoba 24, 2017)
Usuku lokuqala lokuthunyelwe: Okthoba 20, 2017
Eqhubeka naye irekhodi lokubika okuchema nemboni mayelana ne-International Agency for Research on Cancer (IARC), intatheli yeReuters uKate Kelland uphinde wahlasela i-ejensi yomdlavuza ngomhlaka-19 Okthoba 2017 indaba bethi ososayensi bahlele idokhumenti esalungiswa ngaphambi kokukhipha ukuhlolwa kwabo kokugcina okuhlukanisa i-glyphosate njenge- kungenzeka i-carcinogen yomuntu. I-American Chemistry Council, iqembu lezokuhweba embonini yamakhemikhali, yakhipha ngokushesha i- isitatimende sephephandaba bencoma indaba kaKelland, ethi "ilulaza iziphetho ze-IARC mayelana ne-glyphosate" futhi inxusa abenzi benqubomgomo ukuthi "bathathele i-IARC izinyathelo ngokukhwabanisa kwedatha ngamabomu."
Indaba kaKelland icaphune isikhulu esiphezulu seMonsanto esithi “amalungu e-IARC asebenzise kabi futhi ahlanekezela imininingwane yesayensi” kodwa ahlulekile ukusho inani elibalulekile lobufakazi obuvele Imibhalo kaMonsanto uqobo ngokutholwa kwenkantolo okukhombisa izindlela eziningi inkampani esebenze ngazo ukuphatha nokuhlanekezela idatha ku-glyphosate emashumini eminyaka.
Indaba futhi yehlulekile ukusho ukuthi ucwaningo oluningi olwehlisiwe yi-Monsanto ekhokhelwe umsebenzi eyayingenayo imininingwane eyanele yokuhlangabezana namazinga we-IARC. Futhi yize uKelland ecaphuna ucwaningo lwegundane lwango-1983 kanye negundwane lapho i-IARC yehluleke khona ukuvumelana nabaphenyi bokuqala, yehlulekile ukudalula ukuthi lezi kwakuyizifundo ezazikhokhelwa iMonsanto. Uhlulekile nokusho imininingwane ebucayi yokuthi ocwaningweni lwamagundane ngo-1983, ngisho negatsha le-EPA le-toxicology akazange avumelane nabaphenyi bakaMonsanto ngoba ubufakazi be-carcinogenicity babunamandla kakhulu, ngokusho kwemibhalo ye-EPA. Bathe kumamemos amaningi ukuthi impikiswano kaMonsanto ibingamukeleki futhi iyasola, futhi banqume ukuthi i-glyphosate ibe yi-carcinogen.
Ngokushiya la maqiniso abalulekile, nangokuhlanekezela amanye cishe ngaphakathi, uKelland ubhale enye indatshana esebenza uMonsanto kahle, kepha ulahlekise umphakathi kanye nabenzi bezinqubomgomo abathembele kuzindawo zezindaba ezithembekile ukuthola imininingwane eyiyo. Okuwukuphela kwephuzu elikhuthazayo elizothathwa endabeni kaKelland ukuthi kulokhu uvumile ukuthi iMonsanto imnikeze imininingwane.
Izindaba ezihlobene nemibhalo:
Ukuhlaziywa kwendaba kaJuni 2017 yeReuters ebhalwe nguKate Kelland ebiqukethe amaphutha nezitatimende ezidukisayo ezingakalungiswa, Indaba kaReuters 'Kate Kelland IARC Ikhuthaza Ukulandisa Okungamanga (Julayi 2017)
Ukuthola okuningi ngomlando kaKelland wokudukisa ukubika mayelana ne-ejensi yomdlavuza ye-IARC, bheka indaba engezansi eqale yangena Ukulunga nokunemba ekubikeni (Julayi 2017)
I-Reuters vs. I-UN Cancer Agency: Ingabe Izibopho Zebhizinisi Zithonya Ukutholakala Kwesayensi?
Kusukela lapho ihlukanisiwe i-herbicide esetshenziswa kakhulu emhlabeni njenge “mhlawumbe ebanga umdlavuza kubantu,” iqembu lososayensi bamazwe eqenjini lokucwaninga ngomdlavuza le-World Health Organisation belingaphansi ukuhlaselwa okubunayo ngemboni yezolimo kanye nabazalelwayo.
Phakathi ku ikhasi lokuqala uchungechunge enesihloko esithi "Amaphepha eMonsanto," iphephandaba laseFrance Okwezwe (6/1/17) uchaze lokhu kuhlasela “njengempi ye-pesticide yesayensi,” futhi wabika, “Ukusindisa i-glyphosate, inkampani [iMonsanto] yathatha isinyathelo sokulimaza i-United Nations ejensi yomdlavuza ngazo zonke izindlela.”
Ngama-scoops amabili anikezwa izimboni kanye nombiko okhethekile, oqiniswa ukubika kwakhe okuvamile, uKelland uhlose isifufula sokubika okubucayi kwi-WHO's International Agency for Research on Cancer (IARC), eveza leli qembu nososayensi balo bengasakwazi ukuxhumana futhi izinsolo ezingekho emthethweni, nezilinganisanayo mayelana nokushayisana kwezintshisakalo kanye nemininingwane ecindezelwe ekuthathweni kwabo kwezinqumo.Isikhali esisodwa esisemqoka emkhakheni wezikhali embonini kube ukubikwa UKate Kelland, umakadebona Reuters intatheli ezinze eLondon.
Iqembu elisebenzayo le-IARC lososayensi alizange lenze ucwaningo olusha, kepha labuyekeza iminyaka yocwaningo olushicilelwe nolubuyekezwa ngontanga ngaphambi kokuphetha ngokuthi kunobufakazi obunqunyelwe bomdlavuza kubantu kusukela ekuvezweni komhlaba wangempela kuya ku-glyphosate nobufakazi "obanele" bomdlavuza ezifundweni izilwane. I-IARC iphinde yaphetha ngokuthi kunobufakazi obuqinile bokuthi i-genotoxicity ye-glyphosate iyodwa, kanye ne-glyphosate esetshenziswe ekwakhiweni okunjengeMonsanto's Roundup brand ye-herbicide, ukusetshenziswa kwayo kukhuphuke kakhulu njengoba iMonsanto ithengisile izinhlobo zezitshalo ziguqulwe ngokwezakhi zofuzo ukuba "Roundup Ready."
Kepha ngokubhala ngesinqumo se-IARC, uKelland ushaye indiva ucwaningo oluningi olushicilelwe olusekela ukwahlukaniswa, wagxila emaphuzu okukhuluma embonini nasekugxekeni kososayensi ekufuneni ukunciphisa ukucubungula kwabo. Ukubika kwakhe kuncike kakhulu emithonjeni yezimboni ezixhasa umkhakha, ngenkathi yehluleka ukudalula ukuxhumana kwemboni yabo; kuqukethe amaphutha Reuters unqabile ukulungisa; futhi wethule imininingwane ekhethwe ngama-cherry emongweni evela kumadokhumenti angazange awanikeze abafundi bakhe.
Ukuphakamisa eminye imibuzo mayelana nokuzimisela kwakhe njengentatheli yesayensi yizibopho zikaKelland ku Isayensi Media Center (SMC), okuyinhlangano ephikisanayo engenzi nzuzo e-UK exhuma ososayensi nezintatheli, bese iyayithola indawo enkulu yezimali eziqhamuka emaqenjini nasezinkampanini, kufaka phakathi izintshisekelo zomkhakha wamakhemikhali.
I-SMC, ebizwa ngokuthi “i-ejensi ye-PR yesayensi, ”Eyethulwa ngo-2002 ngokwengxenye njengomzamo wokunciphisa izindaba ezithathwa amaqembu afana neGreenpeace neFriends of the Earth, ngokusho kwencwadi yayo umbiko wokusungula. I-SMC isolwa ngokudlala phansi ubungozi bezemvelo kanye nempilo yabantu bemikhiqizo nobuchwepheshe obuthile obunempikiswano, ngokusho kuka abacwaningi abaningi abafunde iqembu.
Ukuchema kukaKelland ngokuthanda leli qembu kuyabonakala, njengoba evela kwi-SMC ividiyo yephromoshini kanye ne-SMC umbiko wokuphromotha, uba khona njalo Ama-SMC amafushane, ukhuluma ku Amashabhu we-SMC futhi waba khona imihlangano eNdiya ukuxoxa ngokusungula ihhovisi le-SMC lapho.
Kelland noma abahleli bakhe akekho Reuters uzophendula imibuzo ephathelene nobudlelwano bakhe ne-SMC, noma ukugxekwa okuthile ngokubika kwakhe.
UFiona Fox, umqondisi weSMC, uthe iqembu lakhe alisebenzanga noKelland ezindabeni zakhe ze-IARC noma anikeze imithombo engaphezu kwaleyo efakwe emaphepheni eSMC. Kusobala nokho ukuthi ukubika kukaKelland nge-glyphosate ne-IARC kukhombisa imibono evezwe ngochwepheshe be-SMC namaqembu embonini kulezo zihloko.
I-Reuters ithatha usosayensi womdlavuza
Ngo-June 14, i-2017, Reuters ishicilelwe a umbiko okhethekile nguKelland osola u-Aaron Blair, ingcweti yezifo eziqhamuka e-US National Cancer Institute nosihlalo wephaneli le-IARC ku-glyphosate, ngokugodla imininingwane ebalulekile ekuhlolweni komdlavuza.
Indaba kaKelland ize yaveza nokuthi imininingwane okuthiwa ibanjiwe ibingasiguqula isiphetho se-IARC sokuthi i-glyphosate kungenzeka i-carcinogenic. Kodwa-ke imininingwane okukhulunywa ngayo yayiyi-subset encane yedatha ye-epidemiology etholwe ngephrojekthi yesikhathi eside eyaziwa njenge Ucwaningo Lwezempilo Lwezolimo (AHS). Ukuhlaziywa kweminyaka eminingana yemininingwane emayelana ne-glyphosate evela ku-AHS kwakusivele kushicilelwe futhi kwabhekwa yi-IARC, kepha ukuhlaziywa okusha kwemininingwane engaqediwe, engashicilelwanga akuzange kubhekwe, ngoba imithetho ye-IARC ifuna ukuthembela kuphela kudatha eshicilelwe.
Umbono kaKelland wokuthi uBlair ubambe idatha ebalulekile ubuphikisana nemibhalo yomthombo lapho asekele khona indaba yakhe, kepha akazange anikeze abafundi izixhumanisi zanoma iyiphi yaleyo mibhalo, ngakho abafundi abakwazanga ukuzihlolela ubuqiniso bezimangalo ngokwabo. Izinsolo zakhe zamabhomu zasatshalaliswa kabanzi, zaphindwa yizintatheli kwezinye izindawo zezindaba (kufaka phakathi umama Jones) futhi yathunyelwa ngokushesha njenge- ithuluzi lokunxenxa ngomkhakha wezolimo.
Ngemuva kokuthola imibhalo yangempela, uCarey Gillam, owayekade eyi Reuters intatheli nomqondisi manje wocwaningo lwe-US Right to Know (iqembu elingenzi nzuzo lapho nami ngisebenza khona), Bekele ngaphandle amaphutha amaningi nokushiywa esiqeshini sikaKelland.
Ukuhlaziywa kunikeza izibonelo zezimangalo ezisemqoka ku-athikili kaKelland, kufaka phakathi nesitatimende okuthiwa senziwe nguBlair, esingasekelwa yikhasi elinamakhasi angama-300 ukubekwa kukaBlair eyenziwa ngabameli bakaMonsanto, noma eminye imibhalo yomthombo.
Isethulo sikaKelland sokukhetha isikhundla sikaBlair sibuye sanganaki obekuphikisana nomqondo wakhe — ngokwesibonelo, iziqinisekiso eziningi zikaBlair zocwaningo ezibonisa ukuxhumana kwe-glyphosate nomdlavuza, njengoba uGillam abhala Huffington Post i-athikili (6 / 18 / 17).
UKelland uchaze ngokungachazeki ukubeka kukaBlair nezinto ahlobene nazo ngokuthi “yimibhalo yasenkantolo,” okusho ukuthi zitholakala emphakathini; empeleni, azizange zifakwe enkantolo, futhi kungenzeka ukuthi zitholwe kubameli bakaMonsanto noma kuma-surrogatives. (Le mibhalo ibitholakala kuphela kubameli abathintekayo kuleli cala, futhi abameli bommangali bathe abayinikanga uKelland.)
Reuters unqabile ukulungisa amaphutha esiqeshini, kufaka phakathi isimangalo esingamanga mayelana nemvelaphi yemibhalo yomthombo kanye nencazelo enganembile yomthombo oyisihluthulelo, isazi sezibalo uBob Tarone, njengo "ozimele weMonsanto." Eqinisweni, uTarone wayenakho uthole inkokhelo yokubonisana kusuka eMonsanto ngemizamo yakhe yokwehlisa isithunzi i-IARC.
Ukuphendula isicelo se-USRTK sokulungisa noma ukuhoxisa i-athikili kaKelland, Reuters Umhleli wamabhizinisi omhlaba uMike Williams ubhale ku-imeyili kaJuni 23:
Sibuyekeze i-athikili kanye nokubika lapho ibisuselwa khona. Lokho kubika kufaka phakathi okubhekiswe kuwe, kepha bekungagcini kukho. Intatheli, uKate Kelland, naye wayexhumana nabo bonke abantu okukhulunywe ngabo endabeni nabanye abaningi, wafunda neminye imibhalo. Ngokwalokho kubuyekezwa, asithathi le ndatshana njengengalungile noma ukugunyaza ukuhoxiswa.
UWilliams wenqabile ukukhuluma ngendaba engamanga "yemibhalo yasenkantolo" noma incazelo engalungile yeTarone njengomthombo ozimele.
Kusukela lapho, ithuluzi lokunxenxa Reuters unikezwe uMonsanto ukhule imilenze futhi wagijima wasendle. NgoJuni 24 Umhleli by IDispatch yaseSt kungezwe amaphutha ngaphezulu kokubika okuvele kudukisa. Maphakathi noJulayi, amabhulogi wephiko langakwesokudla ayesebenzisa i- Reuters indaba yokusola i-IARC ye ukukhwabanisa abakhokhi bentela base-US, izingosi zezindaba ezixhasa umkhakha zazibikezela ukuthi le ndaba izoba “isipikili sokugcina ebhokisini lomngcwabo”Yezimangalo zomdlavuza mayelana ne-glyphosate, kanye no iqembu lezindaba zesayensi mbumbulu beyithuthukisa indaba kaKelland ku Facebook enesihloko esiyimbumbulu esithi i-IARC ososayensi babevumile ukuthi bazifihla.
Lesi bekungekhona okokuqala ukuthi uKelland athembele kuBob Tarone njengomthombo oyisihluthulelo, futhi wehluleka ukudalula ukuxhumana kwakhe embonini, ku-athikili ehlasela i-IARC.
Ngo-Ephreli 2016 uphenyo olukhethekile nguKelland, "Ngubani Othi Ibhekoni Limbi ?," uveze i-IARC njengenhlangano edidayo engalungile kusayensi. Ucezu lwakhiwe kakhulu kwizingcaphuno ezivela kuTarone, eminye imithombo emibili ye-pro-industry ukuxhumana kwezimboni nakho okungazange kudalulwe, kanye nombukeli oyedwa ongaziwa.
Izindlela ze-IARC “aziqondakali kahle,” “aziwusebenzeli kahle umphakathi,” kwesinye isikhathi zintula ubukhali besayensi, “azilungele isayensi,” “azilungele izinhlangano ezilawulayo” futhi zenza umphakathi “into embi,” kusho abagxeki.
UTarone uthe, le nhlangano "ayinazazi, uma kungezona ezesayensi" - icala elicindezelwe ngofeleba esihlokweni esincane.
I-Tarone isebenza kumkhakha we-pro Isikhungo se-International Epidemiology, futhi wake wabandakanyeka kwi ucwaningo lweselula oluyimpikiswano, exhaswe ingxenye yomkhakha womakhalekhukhwini, ongatholanga ukuxhumana komdlavuza nomakhalekhukhwini, okuphikisana ne- izifundo ezikhokhelwa ngokuzimela kumagazini ofanayo.
Abanye abagxeki endabeni yobhekeni lukaKelland kwakunguPaulo Boffetta, usosayensi owayengundabuzekwayo wakudala wase-IARC owabhala iphepha evikela i-asbestos ngenkathi futhi ukuthola imali yokuvikela imboni ye-asbesto enkantolo; noGeoffrey Kabat, owake waba khona ihlukaniswe nososayensi oxhaswe ngemali embonini kagwayi ukubhala iphepha ukuvikela intuthu kagwayi.
UKabat ubuye asebenze ebhodini lokweluleka le-American Council on Science and Health (ACSH), a iqembu langaphambili lebhizinisi. Usuku i Reuters indaba hit, i-ACSH ithumele into yebhulogi (4 / 16 / 17) eziqhayisa ngokuthi uKelland usebenzise umeluleki wakhe uKabat njengomthombo wokuhlambalaza i-IARC.
[Bona okuthunyelwe okuhlobene ngoMashi 2019: Izibopho zikaGeoffrey Kabat kumaQembu Wezimboni Zikagwayi Namakhemikhali]
Ukuxhumana komkhakha wemithombo yakhe, nomlando wabo wokuthatha izikhundla ngokungqubuzana nesayensi ejwayelekile, kubonakala kufanelekile, ikakhulukazi njengoba ukudalulwa kwebhekoni le-IARC kwakumataniswa neKelland i-athikili mayelana ne-glyphosate lowo osola umeluleki we-IARC uChris Portier ngokwenzelela ngenxa yokuzibandakanya kwakhe neqembu lezemvelo.
Ukubiyelwa kwenzalo kwenzelwe ukudicilela phansi incwadi, ehlelwe nguPortier futhi isayinwe ososayensi abangama-94, lokho kuchaze "amaphutha amakhulu" ekuhlolweni kwezinhlekelele ze-European Union okukhipha i-glyphosate engozini yomdlavuza.
Ukuhlaselwa kwePortier, netimu enhle yesayensi / embi yesayensi, kwananela imboni yamakhemikhali Iziteshi ze-PR ngosuku olufanayo kwavela izindatshana zakwaKelland.
IARC ihlehlela emuva
Ngo-Okthoba 2016, kwenye iskoop ekhethekile, UKelland waveza i-IARC njengenhlangano eyimfihlo eyayicele ososayensi bayo ukuthi bayigodle imibhalo ephathelene nokubuyekezwa kwe-glyphosate. Lo mbhalo ubususelwa ekubhaleni okunikezwe uKelland ngu iqembu lomthetho elixhasa umkhakha.
Ukuphendula, i-IARC yathatha isinyathelo esingajwayelekile sokuthumela imibuzo kaKelland kanye ne izimpendulo ababemthumele zona, enikeze umongo oshiywe ngaphandle kwe- Reuters indaba.
I-IARC ichaze ukuthi abameli bakaMonsanto babecela ososayensi ukuthi baphendule amaphepha asalungiswa kanye nezinqumo, futhi ngenxa yamacala aqhubekayo kuMonsanto, "ososayensi bazizwa bengakhululekile ukukhipha lezi zinto, futhi abanye babona ukuthi bayasatshiswa." Le nhlangano ithe bake babhekana nengcindezi efanayo phambilini yokuthi bakhiphe amaphepha asalungiswa ukuze basekele izinyathelo zomthetho ezibandakanya i-asbestos nogwayi, nokuthi kunemizamo yokudonsela amaphepha e-IARC ngamacala enkantolo ye-PCB.
Indaba ayizange isho lezo zibonelo, noma ukukhathazeka mayelana nemibhalo yesayensi esalungiswa egcina isenkantolo, kepha ucezu lwalusinda ekuhlaziyweni kwe-IARC, ukuyichaza njengeqembu "eliphikisana nososayensi emhlabeni wonke," "elibangele impikiswano ”nokuhlolwa komdlavuza“ okungadala ukwesabeka okungadingekile kwezempilo. ”
I-IARC "inezinhloso eziyimfihlo" futhi izenzo zayo "bezihlekisa," ngokusho kwesikhulu seMonsanto esicashunwe endabeni.
IARC yabhala ukuphendula (ukugcizelelwa koqobo):
Lo mbhalo ngu Reuters kulandela iphethini yemibiko engaguquguquki kepha edukisayo mayelana nohlelo lwe-IARC Monographs kwezinye izingxenye zemidiya eziqala ngemuva kokuthi i-glyphosate ihlukaniswe njenge mhlawumbe i-carcinogenic kubantu.
IARC futhi wahlehliselwa emuva Ukubika kukaKelland ngoBlair, ephawula ukungqubuzana kwezintshisekelo nomthombo wakhe iTarone futhi echaza ukuthi uhlelo lokuhlola umdlavuza lwe-IARC aluthathi imininingwane engashicilelwe, futhi "alusekeli ukuhlolwa kwalo emibonweni ethulwe emibikweni yabezindaba," kodwa "kumhlangano ohleliwe nokubuyekezwa kuzo zonke izifundo zesayensi ezitholakala esidlangalaleni nezisemqoka, ngochwepheshe abazimele, ezingenazintshisekelo ezitholakala kubo. ”
Ukulandisa kwe-ejensi ye-PR
I-Science Media Center-eyiKelland usho kanje kube nomthelela ekubikeni kwakhe — unezintshisekelo, futhi wagxekwa nangokuphikisa imibono yesayensi esekela umkhakha. Abaxhasi bamanje nabangaphambilini kufaka phakathi iMonsanto, iBayer, iDuPont, iCoca-Cola kanye namaqembu okuhweba embonini yokudla namakhemikhali, kanye nama-ejensi kahulumeni, izisekelo namayunivesithi.
Ngawo wonke ama-akhawunti, i-SMC inethonya ekwakheni ukuthi abezindaba bazifaka kanjani izindaba ezithile zesayensi, imvamisa ithola eyayo ukusabela kochwepheshe ucaphuna ezindabeni zemidiya nokusakazwa kokushayela nge cindezela ngamafushane.
Njengoba uKelland echaze ku-SMC ividiyo yephromoshini, "Ekupheleni kwesithangami, uyayiqonda ukuthi yini indaba nokuthi kungani ibalulekile."
Leli yiphuzu lomzamo weSMC: ukukhombisa izintatheli ukuthi izindaba noma izifundo ziyakufanele yini ukunakwa, nokuthi kufanele zakhiwe kanjani.
Kwesinye isikhathi, ochwepheshe be-SMC badlala ingozi futhi banikeza isiqinisekiso emphakathini mayelana nemikhiqizo noma ubuchwepheshe obunempikiswano; isibonelo, abacwaningi bagxeke imizamo yabezindaba ye-SMC ukukhwabanisa, ukuphepha komakhalekhukhwini, Isifo sokukhathala okungamahlalakhona futhi ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo.
Imikhankaso ye-SMC kwesinye isikhathi ifaka isandla emizameni yokunxenxa. Ngo-2013 Nature i-athikili (7 / 10 / 13) uchaze ukuthi iSMC iluguqule kanjani igagasi ekusakazweni kwabezindaba kwemibungu yezilwane / yabantu ehlukanisiwe nokukhathazeka kokuziphatha nokubheka ukubaluleka kwayo njengethuluzi lokucwaninga — futhi ngaleyo ndlela yamisa imithetho kahulumeni.
Umcwaningi wabezindaba oqashwe yi-SMC ukuze ahlaziye ukusebenza kwalowo mkhankaso, u-Andy Williams wase-Cardiff University, wabona imodeli ye-SMC njengenkinga, wakhathazeka ngokuthi impikiswano evimbelwe. Williams kuchazwe izifinyezo ze-SMC njengemicimbi ephethwe ngokuqinile ecindezela ukulandisa okukholisayo.
Esihlokweni somngcipheko womdlavuza we-glyphosate, i-SMC inikeza ukulandisa okucacile ekukhishweni kwayo kwabezindaba.
Ukuhlukaniswa komdlavuza we-IARC, ngokusho kwe- Ochwepheshe be-SMC, "Yehlulekile ukufaka imininingwane ebucayi," ibisuselwa "ekubukezweni okukhethwayo" nakubufakazi "obubonakala buzacile" futhi "kukonke akusekeli ukuhlukaniswa kwezinga eliphezulu okunjalo." Monsanto kanye nezinye umkhakha Amaqembu kukhuthazwe izingcaphuno.
Ochwepheshe be-SMC babenombono omuhle ngokwengeziwe wokuhlolwa kobungozi okwenziwa yi-European Food Safety Authority (I-EFSA) kanye ne-European Chemicals Agency (I-ECHA), okususe i-glyphosate yokukhathazeka ngomdlavuza womuntu.
Isiphetho se-EFSA yayisondelene kakhulu nesayensi, ibambisene futhi ilinganiselwe ”kunama-IARC, kanye ne Umbiko we-ECHA yayizimisele, izimele, iphelele futhi “ivunyelwe ngokwesayensi.”
Ukubika kukaKelland ku Reuters kunanela lezo zingqikithi zomkhakha wemboni, futhi kwesinye isikhathi basebenzise ochwepheshe abafanayo, njenge Indaba kaNovemba 2015 ngokuthi kungani ama-ejensi ase-Europe anikeze izeluleko eziphikisanayo mayelana nobungozi bomdlavuza we-glyphosate. Indaba yakhe icaphune ochwepheshe ababili ngokuqondile ku Ukukhishwa kwe-SMC, bese efingqa imibono yabo:
Ngamanye amagama, i-IARC inikwe umsebenzi wokugqamisa noma yini engase ibe ezimeni ezithile, noma ingajwayelekile, ikwazi ukudala umdlavuza kubantu. I-EFSA, ngakolunye uhlangothi, ikhathazekile ngezingozi zangempela zokuphila nokuthi, uma kwenzeka i-glyphosate, bukhona yini ubufakazi obukhombisa ukuthi uma isetshenziswa ezimweni ezijwayelekile, isibulala-zinambuzane sibeka ingozi engamukeleki empilweni yabantu noma emvelweni.
UKelland uhlanganise ukusabela okufushane okubili kwabezemvelo: IGreenpeace ibize ukubuyekezwa kwe-EFSA ngokuthi “mhlophe”, kanti uJennifer Sass woMkhandlu Wezokuvikelwa Kwemvelo uthe ukubuyekezwa kwe-IARC “bekuyinqubo eqinile, evikeleka ngokwesayensi futhi yomphakathi ebandakanya ikomidi lamazwe omhlaba lochwepheshe abangawona umkhakha . ” (An Isitatimende seNRDC ku-glyphosate ukubeka ngale ndlela: “IARC Got It Right, I-EFSA Ithole It Isuka eMonsanto.”)
Indaba kaKelland ilandelele ukuphawula kweqembu lezemvelo “nabagxeki be-IARC… bathi indlela yayo yokuhlonza izingozi isiba yinto engenamsebenzi kubathengi, abalwela ukusebenzisa iseluleko sayo empilweni yangempela,” futhi iphetha ngezingcaphuno zososayensi “othi intshisekelo usebenze njengomxhumanisi weMonsanto. ”
Lapho ebuzwa ngokugxekwa kwe-pro-industry bias ye-SMC, uFox waphendula wathi:
Silalela ngokucophelela noma ikuphi ukugxekwa okuvela emphakathini wezesayensi noma izintatheli zezindaba ezisebenzela abezindaba base-UK, kepha asikutholi ukugxekwa kokuchema ngemboni evela kulaba babambiqhaza. Siyakwenqaba ukusolwa ngokwenzelela embonini, futhi umsebenzi wethu ukhombisa ubufakazi kanye nemibono yabaphenyi besayensi abangama-3,000 abaqavile kulwazi lwethu. Njengehhovisi lezindaba elizimele eligxile kwezinye zezindaba zesayensi ezinempikiswano enkulu, sikulindele ngokuphelele ukugxekwa ngamaqembu angaphandle kwesayensi ejwayelekile.
Ochwepheshe bezesayensi abahlali bedalula ukungqubuzana kwabo kwezintshisekelo ekukhishweni kwezindaba ezikhishwe yi-SMC, noma nasezindimeni zabo ezisezingeni eliphakeme njengabenza izinqumo ngengozi yomdlavuza yamakhemikhali afana ne-glyphosate.
Isazi esivela njalo se-SMC u-Alan Boobis, uprofesa wezemithi yamakhemikhali e-Imperial College London, unikeza imibono ekukhishweni kwama-SMC i-aspartame (“Hhayi ukukhathazeka”), glyphosate emchameni (akunandaba), ama-insecticide kanye nezinkinga zokuzalwa (“Ngaphambi kwesikhathi ukuthola iziphetho”), utshwala, Ummbila we-GMO, trace izinsimbi, Ukudla kwama-rod rod futhi nokuningi.
The Isinqumo se-ECHA ukuthi i-glyphosate akuyona i-carcinogen "kufanele ihalaliselwe," ngokusho kukaBoobis, kanye ne Isinqumo se-IARC ukuthi mhlawumbe i-carcinogenic "ayisiyona imbangela yokwethuka okungafanele," ngoba ibingacabangi ukuthi izibulala-zinambuzane zisetshenziswa kanjani emhlabeni wangempela.
UBoobis umemezele ukuthi akukho kungqubuzana kwezintshisekelo ekukhishweni kwe-IARC noma yikuphi ukukhishwa kwangaphambilini kweSMC okuphethe izingcaphuno zakhe. Kepha wabe esevusa a ihlazo lokungqubuzana kwenzalo ngesikhathi kuvela izindaba zokuthi ubephethe izikhundla zobuholi ne-International Life Sciences Institute (ILSI), a iqembu le-pro-industry, ngasikhathi sinye wabambisana nosihlalo wepaneli ye-UN eyathola i-glyphosate akunakwenzeka ukubeka ingozi yomdlavuza ngokusebenzisa ukudla. (IBoobis okwamanje isitulo weBhodi Labaphathiswa be-ILSI, futhi iphini likamongameli isikhangiso sesikhashana Ye-ILSI / Europe.)
ILSI ithole iminikelo yabantu abayisithupha kusuka eMonsanto naseCropLife International, inhlangano yokuhweba ngezibulala-zinambuzane. USolwazi Angelo Moretto, owayengusihlalo wesigungu se-UN ku-glyphosate kanye noBoobis, naye wabamba indima yobuholi ku-ILSI. Noma kunjalo iphaneli limenyezelwe akukho ukushayisana kwezintshisekelo.
UKelland akazange abike ngalezo zingxabano, noma kunjalo bhala mayelana okutholwe "ochwepheshe be-UN" abakhipha i-glyphosate engozini yomdlavuza, futhi wake wasebenzisa kabusha isicaphuna seBoobis Ukukhishwa kwabezindaba ze-SMC ngendatshana ekhuluma ingulube yase-Ireland engcolisiwe. (Ubungozi kubathengi bebuphansi.)
Lapho ebuzwa mayelana nenqubomgomo yokudalula inzalo ye-SMC, nokuthi kungani ukuxhumana kweBoobis 'ISLI kungadalulwanga ekukhishweni kwe-SMC, uFox waphendula wathi:
Sicela bonke abacwaningi esibasebenzisayo ukuhlinzeka ngama-COI abo futhi senze ukuthi labo batholakalele izintatheli. Ngokuhambisana nezinye izinqubomgomo ze-COI eziningana, asikwazi ukuphenya yonke i-COI, yize samukela izintatheli ezikwenza lokho.
UBoobis akatholakalanga ukuphawula, kodwa utshele i- Guardian, "Indima yami ku-ILSI (kanye namagatsha ayo amabili) njengelungu lomkhakha womphakathi kanye nosihlalo wamabhodi abo abaphathiswa, izikhundla ezingaholi."
Kodwa ukungqubuzana "kubangele ukulahlwa okufutheka okuvela kuma-MEPs aluhlaza nama-NGO," i Guardian kubika, “kuqiniswe ukukhishwa kombiko [wephaneli le-UN] ezinsukwini ezimbili ngaphambi kokuba kuvunyelwe kabusha i-EU ukuvotela i-glyphosate, okuzobiza izimboni zamarandi ezigidigidi zamarandi.”
Futhi kunjalo nangewebhu ethintekile yethonya ebandakanya izinkampani, ochwepheshe besayensi, ukusakazwa kwabezindaba kanye nempikiswano esezingeni eliphakeme nge-glyphosate, manje edlala ezingeni lomhlaba njengeMonsanto ubhekene nokumangalelwa ngaphezulu kwamakhemikhali ngenxa yezimangalo zomdlavuza, futhi ifuna ukuqeda ifayili le- Isivumelwano esingu- $ 66 billion neBayer.
Okwamanje, e-US, njengoba Bloomberg kubika ngoJulayi 13: “Ingabe Umdlavuza Obulala Kakhulu Wezwe Uyimbangela Yomdlavuza? I-EPA kaTrump Izonquma. ”
Imilayezo eya Reuters kungathunyelwa le website (noma nge Twitter: @Reuters). Sicela ukhumbule ukuthi ukuxhumana ngenhlonipho kuphumelela kakhulu.
Uphenyo lwethu U-Alan Boobis, I-American Chemistry Council, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, Angelo Moretto, Bayer, UBob Tarone, Coca-Cola, ICropLife International, Dupont, I-European Chemicals Agency, Isiphathimandla Sezokuphepha KwaseYurophu, UFiona Fox, UGeoffrey Kabat, I-Imperial College yaseLondon, Isikhungo se-International Epidemiology, I-International Life Sciences Institute, UKate Kelland, Mike Williams, Monsanto, UPaulo Boffetta, Reuters, Isayensi Media Center, Umuzwa Ngezesayensi, IDispatch yaseSt
UKate Kelland weReuters ukhuthaze ukulandisa okungamanga nge-IARC no-Aaron Blair
Posted on July 24, 2017 by UStacy Malkan
QAPHELA uJanuwari 2019: Imibhalo efakwe enkantolo khombisa ukuthi iMonsanto kuhlinzekwe uKate Kelland enemibhalo yendaba yakhe kaJuni 2017 ekhuluma ngo-Aaron Blair futhi wamnika umugqa wesilayidi wamaphoyinti okukhuluma inkampani yayifuna ukumbozwa. Ngemininingwane engaphezulu, bheka Okuthunyelwe kukaCarey Gillam's Roundup Trial Tracker.
Ukuhlaziywa okulandelayo kwalungiswa nguCarey Gillam futhi kwathunyelwa ngoJuni 28, 2017:
NgoJuni 14, 2017 Reuters esihlokweni elibhalwe nguKate Kelland, elinesihloko esithi "I-ejensi yomdlavuza ye-WHO ishiye ebumnyameni phezu kobufakazi be-glyphosate," isole ngephutha usosayensi womdlavuza ngokugodla imininingwane ebalulekile ekuhlolweni kokuphepha kwe-glyphosate okwenziwe yi-International Agency for Research on Cancer (IARC).
Indaba kaKelland iqukethe amaphutha ayiqiniso futhi isho iziphetho eziphikisana nokufundwa okugcwele kwemibhalo ayikhombise njengemithombo eyinhloko. Kuyaphawuleka ukuthi uKelland akazange axhumanise nemibhalo ayikhombile, okwenza abafundi bangakwazi ukuzibona ukuthi uphambuke kangakanani ekuchazeni. I- idokhumenti eyinhloko yomthombo iphikisana ngokusobala nomqondo wendaba kaKelland. Eminye imibhalo indaba yakhe ekhonjisiwe, kepha futhi ayixhumananga nayo, ingatholakala ekugcineni kwalokhu okuthunyelwe.
Ingemuva: Indaba yeReuters yayingenye yochungechunge lwezingcezu ezibucayi i-ejensi yezindaba eyishicilele nge-IARC uKelland ayibhala ngemuva kokuthi i-IARC ihlukanise i-glyphosate njenge kungenzeka i-carcinogen yomuntu ngoMashi 2015. IGlyphosate iyimboni yokubulala ukhula enenzuzo enkulu esetshenziswa njengesithako esiyinhloko emikhiqizweni yokubulala ukhula iMonsanto's Roundup, kanye namakhulu eminye imikhiqizo edayiswa emhlabeni jikelele. Ukwahlukaniswa kwe-IARC kudale ukuqulwa kwamacala amakhulu e-United States alethwe ngabantu abasola ukuthi umdlavuza wabo ubangelwe yiRoundup, futhi kwagqugquzela abalawuli be-European Union kanye ne-US ukuthi bakhulise ukuhlolwa kwabo kwamakhemikhali. Ngokuphendula ukuhlukaniswa kwe-IARC, futhi njengendlela yokuzivikela ekumangalelweni kwamacala kanye nokuqinisa ukwesekwa kwezomthetho, iMonsanto ifake izikhalazo eziningi nge-IARC efuna ukubukela phansi ukwethembeka kwe-IARC. Indaba ka-June 14 Kelland, eyacaphuna isikhulu esiphezulu se “Monsanto” se-Monsanto, yaqinisa leyo mizamo yamasu futhi yashiwo nguMonsanto nabanye embonini yamakhemikhali njengobufakazi bokuthi ukuhlukaniswa kwe-IARC kunamaphutha.
Ukufakwa kukasosayensi u-Aaron Blair, ukukhulumisana okungaqondakali kanye nokuxhumana nge-imeyili endabeni yakhe ngokuthi "amadokhumende asenkantolo" bekungeyona imibhalo yenkantolo kepha bekuyimibhalo eyakhiwe yatholakala njengengxenye yokutholwa enkantolo yamacala amaningi eza nezisulu zomdlavuza Umangalela uMonsanto. Le mibhalo ibiphethwe yithimba labameli bakaMonsanto kanjalo nethimba labammangali. Bheka i-docket US Court Court yesifunda esiseNyakatho neCalifornia, icala lokuhola 3: 16-md-02741-VC. Uma iMonsanto noma i-surrogate inikeze uKelland amadokhumende, lokho kufuna kufanele ngabe kushiwo. Njengoba kunikezwe ukuthi le mibhalo ayitholakalanga enkantolo, njengoba indaba kaKelland isho, kubonakala sengathi iMonsanto noma ama-surrogates batshala udaba lwendaba futhi banikeza uKelland imibhalo, noma okungenani izingxenye ezithile zemibhalo, kanye nokuhlolwa kwayo.
Umbhalo kaKelland unikeza ukuphawula nokuchazwa kwesikhundla esivela kuBob Tarone, uKelland amchaza ngokuthi “ozimele ngeMonsanto.” Nokho imininingwane inikezwe yi-IARC kusungula ukuthi iTarone isebenze njengomxhumanisi okhokhelwayo eMonsanto emizameni yayo yokuhlambalaza i-IARC.
I-Reuters ihlekise lolu daba ngalesi sitatimende: "Usosayensi ohola lokho kubuyekezwa wayazi ngemininingwane emisha engakhombisi ukuxhumana nomdlavuza - kodwa akakaze akhulume ngayo futhi ne-ejensi ayizange iyinake." UKelland waveza ukuthi uDkt Blair wayefihla ngenhloso imininingwane ebucayi. Noma kunjalo ukufakwa kwemali kukhombisa ukuthi uBlair ufakazile ukuthi imininingwane okukhulunywa ngayo "ibingakalungeli" ukuthunyelwa kumagazini ukuze ishicilelwe futhi ngeke ivunyelwe ukuthi icutshungulwe yi-IARC ngoba ibingakaqedwa futhi ishicilelwe. Idatha eningi yaqoqwa njengengxenye yeSifundo Sezempilo Sezolimo Sase-US ebanzi futhi ibizofakwa eminyakeni eminingana yolwazi olushicilelwe ngaphambili oluvela ku-AHS olungakhombisi ukuhlangana phakathi kwe-glyphosate ne-non-Hodgkin lymphoma. Ummeli waseMonsanto ubuze uBlair ngokuthi kungani imininingwane ingashicilelwanga ngesikhathi esizobhekwa yi-IARC, ethi: “Unqume, nganoma yisiphi isizathu, ukuthi leyo datha ngeke ishicilelwe ngaleso sikhathi, ngakho-ke ayizange ibhekwe IARC, akunjalo? ” UBlair uphendule wathi: “Cha. Futhi uyayingcolisa le nqubo. ” “Esinqume ukuthi kube ngumsebenzi ebesiwenza kulezi zifundo ezahlukene ubungakabi - awukakulungeli ukuthunyelwa kumajenali. Noma usuthathe isinqumo sokuyithumela emaphephandabeni ukuze ibuyekezwe, awunqumi ukuthi izoshicilelwa nini. ” (Blair deposition transcript page 259) UBlair uphinde wathi kummeli weMonsanto: “Okungafanelekile ukusheshe uphuthume okuthile okungakahlaziywa ngokuphelele noma kucatshangelwe kahle” (ikhasi 204).
UBlair uphinde wethula ubufakazi bokuthi eminye imininingwane evela ku-AHS engakaqedwa, engashicilelwe "ibingabalulekanga ngokwezibalo" (ikhasi 173 lokufaka imali). UBlair uphinde wafakaza kulokho kufakwa mayelana nedatha ekhombisa ukuxhumana okuqinile phakathi kwe-glyphosate ne-NHL nayo engazange ivezelwe i-IARC ngoba ayizange ishicilelwe.
UBlair ufakazele ukuthi eminye imininingwane evela ocwaningweni lweProject Pooled Project ikhombise ukuthi ubudlelwane obuqinile kakhulu ne-NHL ne-glyphosate, enobungozi obuphindwe kabili nobuphindwe kathathu obuhambisana ne-pesticide ebonwa kubantu abasebenzisa i-glyphosate ngaphezu kokuphindwe kabili ngonyaka. Njengedatha ye-AHS, le datha nayo ayizange ishicilelwe noma inikezwe i-IARC (amakhasi 274-283 we-Blair deposition).
Umbhalo kaKelland uphinde wathi: “UBlair uphinde wathi imininingwane ibizoguqula ukuhlaziywa kwe-IARC. Uthe bekuzokwenza ukuthi kungabi namathuba amancane okuthi i-glyphosate ihlangabezane nemibandela ye-ejensi yokuchazwa ngokuthi 'mhlawumbe yi-carcinogenic.' ”Lobo bufakazi (emakhasini 177-189 of deposition) abuzisekeli nhlobo lezo zitatimende. Ekugcineni uBlair uthi “mhlawumbe” ukuze abuze imibuzo evela kummeli kaMonsanto ebuza ukuthi ngabe idatha ye-AHS ka-2013 ifakiwe yini ekuhlaziyweni kwedatha ye-epidemiology ebhekwe yi-IARC, uma lokho “bekuzokwehlisa ubungozi bezihlobo ze-meta-glyphosate kanye ne-non-Hodgkin lymphoma ngisho nangaphezulu… ”Indaba kaKelland nayo ishiya isithombe sokuthi le datha ye-epidemiology engashicilelwe evela ocwaningweni olungakaqedwa ngabe ishintsha umdlalo we-IARC. Eqinisweni, ukufunda lokhu kufakwa ngokuphelele, bese ukukuqhathanisa nombiko we-IARC we-glyphosate, kugcizelela ukuthi lowo mbono ungamanga futhi udukisa kanjani. UBlair ufakaze kuphela kwimininingwane ye-epidemiology futhi i-IARC ibisivele ibubonile ubufakazi besi sifo obubonakala njengobuncane. Ukuhlukaniswa kwayo kwe-glyphosate kwabona ukubaluleka kwedatha yezilwane (i-toxicology) eyibuyekeza, ikubheka "njengokwanele."
UKelland uziba izingxenye ezibalulekile zokufakwa kukaBlair ngqo ocwaningweni olushicilelwe lowe-2003 olathola ukuthi “kwakukhona ukuphindeka kabili kwengozi ye-non-Hodgkin's lymphoma kubantu ababekade bevezwa yi-glyphosate” (amakhasi 54-55 of the deposition).
UKelland akabunaki ubufakazi obethulwe eBlair mayelana "namaphesenti angama-300 engcupheni eyandisiwe" yomdlavuza ocwaningweni lwaseSweden (ikhasi 60 lokufakwa).
Ukufunda konke ukufakwa kwemali kukhombisa ukuthi uBlair ufakaze ngezibonelo eziningi zezifundo ezibonisa ukuhlangana okuhle phakathi kwe-glyphosate nomdlavuza, konke uKelland akushaya indiva.
UKelland ubhala ukuthi ebufakazini bakhe bezomthetho, uBlair uphinde wachaza i-AHS "njengeyinamandla" futhi wavuma ukuthi imininingwane ayibonisi ukuxhumana nomdlavuza. Uveze ukuthi ubekhuluma ngemininingwane ethile engashicilelwe yango-2013 kwi-NHL ne-glyphosate okuyi-subset encane yolwazi etholwe ku-AHS, lapho ubufakazi bukhombisa ukuthi wayekhuluma ngesambulela esikhulu somsebenzi se-AHS, ebesilandelela imindeni yasepulazini. nokuqoqa idatha kumayelana nezibulala-zinambuzane iminyaka eminingana. Lokho uBlair akusho empeleni nge-AHS ebanzi yilokhu: “Kungumsebenzi onamandla. Futhi kunezinzuzo. Angiqiniseki ukuthi ngingathi yiyona enamandla amakhulu, kodwa isifundo esinamandla. ” (ikhasi 286 lokufaka imali)
Ngaphezu kwalokho, lapho ekhuluma ngqo ngemininingwane ye-AHS ka-2013 kwi-glyphosate ne-NHL, uBlair ukuqinisekisile ukuthi imininingwane engashicilelwanga idinga “ukutolikwa okuqaphile” uma kubhekwa inani lamacala avezwe emaqenjini amancane "lincane" (ikhasi 289).
UKelland uthi "I-IARC itshele iReuters ukuthi, yize bekukhona imininingwane emisha nge-glyphosate, ibihambisana nokutholakele kwayo," iphakamisa isimo se-cavalier. Isitatimende esinjalo sidukisa ngokuphelele. Yini iARC empeleni wathi bekungumkhuba wayo ukungacabangi okutholakele okungashicilelwanga nokuthi ingahlola kabusha izinto lapho umzimba omkhulu wedatha entsha ushicilelwa ezincwadini.
IMonsanto Spin Doctors Target Cancer Scientist kuFlawed Reuters Indaba, nguCarey Gillam (Juni 2017)
Reuters Vs. I-UN Cancer Agency: Ngabe Izibopho Ezihlanganisiwe Zithonya Ukutholakala Kwesayensi? nguStacy Malkan (Julayi 2017)
Izimangalo eziningi ezidukisa nge-IARC kubika iReuters nguKate Kelland, USRTK (Okthoba 2017)
Ukufakwa okuqoshwe ngevidiyo kuka-Aaron Earl Blair, Ph.D., Mashi 20, 2017
Khombisa # 1
Khombisa # 2
Khombisa # 3
Khombisa # 4
Khombisa # 5
Khombisa # 6
Khombisa # 7
Khombisa # 9
Khombisa # 10
Khombisa # 11
Khombisa # 12
Khombisa # 13
Khombisa # 14
Khombisa # 15
Khombisa # 16
Khombisa # 17
Khombisa # 18
Khombisa # 19A
Khombisa # 19B
Khombisa # 20
Khombisa # 21
Khombisa # 22
Khombisa # 23
Khombisa # 24
Khombisa # 25
Khombisa # 26
Khombisa # 27
Khombisa # 28
izibulala-zinambuzane U-Aaron Blair, U-Alan Boobis, I-American Chemistry Council, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, Angelo Moretto, Bayer, UBob Tarone, Coca-Cola, ICropLife International, Dupont, I-European Chemicals Agency, Isiphathimandla Sezokuphepha KwaseYurophu, UFiona Fox, UGeoffrey Kabat, glyphosate, IARC, I-Imperial College yaseLondon, I-International Agency for Research on Cancer, Isikhungo se-International Epidemiology, I-International Life Sciences Institute, UKate Kelland, Mike Williams, Monsanto, UPaulo Boffetta, Reuters, Isayensi Media Center, Umuzwa Ngezesayensi, IDispatch yaseSt, World Health Organization